Mid-mgbụsị akwụkwọ Festival-News Center-NINGBO SUNSOUL UTgbọ ala ngwa mma CO., LTD
Mid-mgbụsị akwụkwọ Festival
N’abalị iri-na-ise nke ọnwa Ọgọstị nke kalenda ọnwa, ọ bụ emume Mid-mgbụsị akwụkwọ ọdịnala dị na China. N’abalị emume mgbụsị akwụkwọ etiti ọnwa, ọnwa na-enwu gbaa ma na-adị ọcha, ndị ochie na-ewere ọnwa dị ka akara ngosi nke njikọta. Ya mere, a na-akpọkwa ya “Ememme unchịkọta”. Ndị mmadụ ga-ahọrọ na Ezukọ ezukọta ezinụlọ, na-ekerịta ọ joyụ nke ezinụlọ, iji mee ememme a, enwere omenala na ebe dị iche iche, Ndị mmadụ ga-etinye ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, kpee ekpere maka udo, rie achicha ọnwa ma kpee ekpere maka njikọta.
Oge mgbụsị akwụkwọ Mid-Autumn bụ oge ndị China nọ n’ụwa nile na-agbakọta, rie achịcha pụrụ iche ma lelee ọnwa gbazuru agbazu. Ọ bụ ezie na oge obi ụtọ, enwere akụkọ na-agbawa obi nke na-akọwa etu o si bịa.
Akụkọ banyere ndị China na-akọ banyere dike Houyi na nwunye ya mara mma Chang'e. Houyi bụ onye na-agba ụta dị ike. N'oge ochie, n'ihi na anyanwụ iri dị na mbara igwe, na-agba ụwa na ndị bi na ya ume. Hyiyi jiri aka ya zọpụta ha. N'iji ike dị egwu na akara aka dị elu, ọ gbagburu anyanwụ itoolu wee hapụ otu na mbara igwe ka ụmụ mmadụ wee nwee ike ịnụ ọkụ na ọkụ ya. Ndị mmadụ na Houyi achọghị ịhapụ nwunye ya ọ hụrụ n'anya naanị ya n'ụwa wee nye ya Chang'e eelixir ahụ ka o chekwaa ma chọọ onye ọzọ maka nwunye ya. Chang'e jiri nlezianya debe ya na igbe osisi ebe a na-ele ihe ọ na-eme anya. site Peng Meng- otu n'ime di ya enyi
Ka Houyi lara n'oge na-adịghị anya, Peng Meng ji mma agha ka ọ banye n'azụ ụlọ nke ime ụlọ, na-amanye Chang ka ọ nyefee ụlọ ahụ. 'e si n'ụlọ ya fega n'ebe ahụ dị elu ma mesịa rute na ọnwa.
N'abalị ihu igwe, Houyi hụrụ Chang'e na ọnwa, kpọọ ya ma gbalịa gbatuo ya, mana oge agabigala.
Ugbua chi nwanyị nke ọnwa, Chang'e kwesiri ikpebi di ya rue mgbe ebighi ebi. Houyi kwanyeere nwunye ya ugwu site na ịhazi tebụl na ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, anụ na mkpụrụ osisi ọ hụrụ n'anya. Omenala nke ịchụ aja maka ọnwa na-ebute site na afọ, site na Western Dhouasty (1045 ruo 770 BC) gaa n'ihu.
Ma otua ka o di taa, ndi China nile no na mba uwa na-ezukuta n'èzí, rie nri onu ma le onwa buru ibu, dika ndi nna ochie amaala na ndi mere eme.
Agbanyeghị, n'uche anyị, ihe mbụ na ụbọchị mgbụsị akwụkwọ bụ ịnọnyere ezinụlọ gị, nwee ezigbo iko tii, lelee ọnwa ọla ọcha zuru oke, rie achicha ọnwa na-esi isi.
Ọzọ: Ichebe gburugburu ebe obibi bụ ọrụ anyị